Madheshvani : The voice of Madhesh - “दरबार” काठमाडौंमा, मेयरजस्ता “सिंह” गाउँमा : रेणु झा
उपमेयर, हंसपुर नगरपालिका, धनुषा
प्रकाशित मिति : २०७६ साउन २४ गते शुक्रबार
० हंसपुर नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर समूहबीच किन झडप भयो ?
— मेयर रामज्ञान मण्डलले नगरपालिका लुटेर लग्ने विचारमा हुनुहुन्थ्यो । यसमा सबभन्दा बढी गल्ती प्रशासनको छ । मेयरले कार्यालय लग्नका लागि ६० जना प्रहरीसहित दुई जना कर्मचारीलाई पठाउनुभएको थियो । हामीलाई थाहै नदिइकन प्रहरीसहित कार्यालयका सामानहरू लिन आएको थियो । मैले किन आएको सोध्दा प्रहरीले हात समात्यो, मेरो ड्राइभरलगायत ६ जना माथि कुटपिट ग¥यो । हंसपुर नगरपालिकाको कार्यालय सरकारले बघचौडामा तोकेको छ । तर मेयर मण्डलले आफ्नो गाउँ बेल्ही चोकमा कार्यालय संचालन गर्नुभएको छ । बघचौडा कार्यालयबाट बेल्ही कार्यालयका लागि समान लग्न तीन ट्याक्टरमा करिब ५०/६० जना लिएर पुगेका थिए । हामीले बघचौरामै कार्यालय राख्नुपर्ने भन्दै कार्यालयबाट समान लग्न राकेपछि झडप भएको हो ।
० बघचौराबाट नगरपालिकाको कार्यालय मेयरले किन सार्न खोज्नुभएको हो ?
— त्यो हामीलाई थाहा दिइएको छैन । तर, मलाई यसमा कुनै आपत्ति छैन । कानून प्रक्रिया पु¥याएर आफ्नै घरभित्र राख्नुस्, तर कानून प्रक्रिया पु¥याएर । राजपत्रमा अहले बघचौराको नाम छ, जब बेल्हीचौकको नाम अनि राख्नुस्, हामीलाई कुनै आपत्ति हुँदैन । एउटा नगरपालिकामा दुईटा कार्यालय हुँदैन, यो कानूनविपरीत हो । तर, मेयरले म नै यहाँको सरकार हो दाबी गर्नुहुन्छ । कानून प्रक्रियाअनुसार उहाँले काम गरिरहनुभएको छैन ।
० मेयरले तपाइँहरूलाई खबर नै नगरी सिधै कार्यालय सार्न खोज्नुभयो ?
— हो । मेयरले साउन ३ गते नै बेल्हीचौकमा कार्यालयको उद्घाटन गरिसक्नुभएको छ । सोही दिन राति ११ बजे कार्यालयका सामान लिन मेयर मान्छे पठाउनुभएको थियो । त्यहींका एक जना मान्छेले मलाई जानकारी दिए । त्यसपछि मेरो गाउँका ८–१० जना युवाले राति ११ बजे मेरो घरमा आएर मेयरले कार्यालयको ताला फुटाउन मान्छे पठाएको भनेर भने । त्यसपछि आफ्नो घरबाट आएर प्रशासन फाँटमा ताला लगाइदिएँ । यदि उहाँले कानून प्रक्रियाअनुसार कार्यालय सार्नुभयो भने हामी स्वागत गर्छौं । तर, उहाँ मान्छे पठाएर रातिराति लुट्न किन प¥यो ?
० भनेपछि, अहिले नगरपालिकाको कार्यालय कहाँ छ ?
— बेल्हीचौकमा उहाँले ३० हजारमा घर भाडामा लिइसक्नुभएको छ, उद्घाटन गरिसक्नुभएको छ । मेरो प्रश्न छ कि एउटा नगरपालिकामा दुईटा चलानी र दर्ता हुन्छ त ? हुँदैन । उहाँले सबै दुई–दुई वटा गर्नुभएको छ ।
० अहिले बघचौरामा रहेको नगरपालिका कार्यालयमा मेयर आउनुहुन्न ?
— आउनुहुन्न । उहाँले सबै कर्मचारी बेल्हीचौकमै लग्नुभएको छ । म एक्लै बघचौराको कार्यालयमा न्यायिक समिति चलाइरहेको छु । उहाँले एक जना पनि कर्मचारी यहाँ राख्नुभएको छैन ।
० दुई–दुईटा कार्यालय जसरी राख्न खोजिएको छ, यसको कानूनी उपचार के सोच्नुभएको छ ?
— उहाँले कुनै पनि कानून नमान्ने भनिसक्नु भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, म आफै यहाँको सरकार हो । २०७४ सञ्चालन ऐनमा जुन दिएको छ, त्यो कानूनलाई मिचेर कुनै सरकार जान सकिँदैन । मेयरको हैकमवादी हामीले कति बर्दास्त गर्ने ? हाम्रो छ जनालाई सिकिस्त बनाइदिएको छ, चार/पाँच जना महिलामाथि पनि कुटपिट भएको छ ।
० यसको निकास कसरी निकाल्नुहुन्छ ?
— निकासका लागि मैले सामान्य समिति, जिल्ला प्रशासन समिति, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिलामा हाम्रा गाउँका युवाहरूले उजुरी दिएका छन् । तर, अहिलेसम्म हामीलाई पहल गर्नका लागि बोलाइएको छैन ।
० कार्यालयको विवादका कारण विकास निर्माणका कामहरू कतिको प्रभावित भइरहेको छ ?
— विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने कागजमा बढी देखिएको छ । बिल त पूरै बन्छ तर, काम त्यति देखिँदैन । कामहरूमा इन्जिनियरको मूल्यांकन पनि भएको छैन । मेयरको व्यक्तिगत योजनाहरूमा मात्रै इन्जिनियरको हस्ताक्षर भएको छ । उहाँले उपभोक्ता उचाल्ने काम पनि गरिरहनुभएको छ । भुक्तानी हुनका लागि सबै कामको मूल्यांकन पनि हुनुप¥यो नि । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी दिने काम थियो, कार्यालय सार्ने काम थिएन । तर, मेयरले कार्यालय सार्ने विवाद झिकेर मारामार–पिटापिट गराइदिनुभयो । यसको निकासका लागि सरोकारवाला पक्षहरूसँग आग्रह गर्छु ।
० यस्तो अवस्थामा हंसपुरका जनताले स्थानीय सरकारको महसुस गरेका छन् ?
— केही पनि छैन । उहाँले यत्रो कुटाकुट गराउनुभयो, तर एक कल फोन गरेर एकपटक पनि माफी माग्नुभएको छैन । झन् विवाद बढाउन खोज्नुभएको छ । कार्यालय लुटेरै छाड्ने किसिमका कुरा गर्नुहुन्छ ।
० स्थानीय निर्वाचनपश्चात् सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भनिन्थ्यो, यो नारा कतिको महसुस भएको छ ?
— यो नारा एकदम महसुस भएको छैन । दरबार काठमाडौंमा, मेयरजस्ता सिंह गाउँमा भएका छन् ।
० भनेपछि मेयरले आफूलाई राजा ठानिरहेका छन् ?
— हो । राणा शासनभन्दा पनि ठूलो शासकको रूपमा देखिएका छन् ।
० कर्मचारी भर्ना गर्दा मेयरले आफ्नै परिवारका व्यक्तिहरूलाई राखेका छन् भन्ने कुराहरू पनि छ, तपाइँ के भन्नुहुन्छ ?
— हो । उहाँले आफ्ना परिवार, नातागोता पर्नेहरूलाई मात्र कर्मचारीको रूपमा भर्ना गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्ना दुई जना भाई, साढु, भिनाजु लगायतलाई मात्र नियुक्त गरेका छन् । उहाँले त हैकमवादी तरिकाले कार्यालय सञ्चालन गर्नुभएको छ ।